Maxkamada G/Banaadir oo Ajaanib dacwad loo heystay La is hortaagay – XAMAR POST
Maxkamada G/Banaadir oo Ajaanib dacwad loo heystay La is hortaagay
Shalay oo taariikdhu aheyd 29/05/2021 waxay Maxkamadda G/banaadir u fariisatay Gal-dacwadeedka ciqaabta ah oo loo heystay eedeysanayaal ka kooban lix qof oo 4 ka mid ah ay yihiin ajaanib.
Xubnaha dacwada loo heystay ayaa , ayaa dhamaantood ahaa shaqaalihii iyo asasaasayaashii shirkada SAHAN RESEARCH, laguna eedeynayey falal ay ka mid yihiin faafinta xogaha amaniga qaranka iyo basaasid siyaasadeed loona heystay in ay ku xad gudbeen Qaranka.
Dadka lasoo dacweeyey ayaa dhamaantood ay yihiin maqanayaal horayna ay Maxkamaddu u sameysay baafin iyo u yeeritaan laakin ay imaan waayeen, Maxkamadduna ay u qabatay Qareeno difaaca eedeysanayaashaas.
Fadhiga Maxkamada ayaa la sheegay in la guda galay dhageysiga gal dacwadeedkaasi.
Intaas kadib qareenadii waxa ay keeneen fadhigii shalay is hortaag ka dhan ah Eedda, sidoo kalena Xafiiska Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranku wuxuu ka jawaabay is hortaagaasi la sameeyey, Maxkamadduna waxay kusoo afmeertay fadhigaan in ay qaraar ka soo saarayso is hortaagaasi ay keeneen qareenada Difaaca Edeysanayaasha.
Warar ay heshay Xamar Post ayaa sheegaya in dib loogu laabanayo shuruucda Maxkamada iyo sida laga yeelayo cid walbo oo fal is hortaag ah ku sameysa ciqaabta ay mudan karto.
Shirkada sahan reseach ayaa waxa Soomaaliya laga mamnuucay 17-kii December sanadkii 2018-kii waxaana iska leh nin udhashay Dalka Canada oo lagu magacaabo Mathew Breyden.
DHAGEYSO: Wasiir Beyle oo mar kale Shacabka weydiistay Dhaqaale